माछापुछ्रे बैंक पाल्पाको शाखा स्थान्तरण « Sansar News
१३ कार्तिक २०७४, सोमबार १२:३४
१३ कात्तिक, पाल्पा । माछापुछ्रे बैंक लिमिटेडले पाल्पामा आफ्नो शाखा स्थान्तरण गरेको छ । बैंकले १३ कात्तिकका दिनदेखि संचालनमा आउने गरी भगवती टोल, तानसेन ३ रहेको साखालाई शिल्खान टोल ४ मा स्थान्तरण गरेको जनाएको छ ।
सो साखा पाल्पा तानसेन नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार शाहीद्धारा उद्घाटन गरिएको थियो ।
थप सुविधाजनक स्थानबाट संचालनमा आएको यस शाखाबाट बैकले आफ्ना ग्राहकहरुलाइ कर्जा, निक्षेप लगायतका सम्पुर्ण बैकिङ्ग सुबिधा उपलब्ध गराएको छ । यसका साथै २४ घण्टा नै रकम झिक्न सकिने आफ्नै एटिएमको सुबिधा समेत उपलब्ध गराएको बताएको छ ।
रु. ७ अर्व ३७ करोड चुक्ता पुंजी रहेको यस बैकले २०७४ साल असार मसान्तसम्म रु ५८ अर्व ६२ करोड निक्षेप परिचालन गरी रु. ५१ अर्व ८६ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ भने सो अबधिमा रु. १ अर्व ३० करोड खुद मुनाफा गरेको छ ।
यस बैकले दैनिक बैकिङ्ग कारोव।र संचालन गर्न प्रयोग गरेको Banking Software, Globus बिश्वमानै उत्कृष्ट मानिन्छ र यसको माध्यमबाट ग्राहकहरुले अत्याधुनिक सेवा प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
बैकले पुर्वमा झापा देखि पश्चिममा कन्चनपुर साथै हिमाल देखि पहाड, र तराईसम्म आफ्ना ६२ वटा शाखाहरु , ४ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टरहरु लगायत ४ शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा समेत गरी जम्मा ७० स्थानवाट ग्राहक महानुभावहरुमा सम्पुर्ण बंैकिङ्ग सुबिधा प्रदान गरीरहेको जनाएको छ ।